HOME - B2B Gaming (mm)
အစမ်း ငွေကြေးဆိုဒ် | ခရစ်ဒစ်ဆိုဒ်
နောက်ဆုံးတော့ ရောက်ရှိလာပါပြီ! ၂၉ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်စတင်မည့် B2Bဂိမ်းသည် နောက်ဆုံးပေါ် 243 နည်းလမ်းစလော့နှင့်အတူ သင့်ထံသို အလုံးစုံသောစလော့အတွေ့အကြုံအသစ်များကို ယူဆောင်လာပါပြီ၊၊
ဤအကြိမ်တွင် ကျွန်ုပ်တိုသည် သင့်အား စိတ်လှုပ်ရှားစေမည့် 243 နည်းလမ်းပုံစံအသစ်တွင် စလော့ဂိမ်း 1 ခုသာမက ကွဲပြားသော စလော့4ခုကိုလည်း သင့်ထံသိုယူဆောင်လာပါပြီ။
အရသာရှိသော တရုတ်အစားအစာမှ သင်၏ချစ်စရာကောင်းသည့် ဝက်ဝံရုပ်၏အမှတ်တရများအထိ၊ ဤစလော့ 4ခုသည်သင့်ကို အံ့သြဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို၏ နောက်ဆုံးပေါ် B2B စလော့ဂိမ်းများမှ ပျော်ရွှင်ခြင်းများကိုရရှိပါစေ။ ယခုပဲ ရယူလိုက္ပါ။ အွန်လိုင်း WHITE LABLE
အွန်လိုင်းဂိမ်းစီးပွားရေးတွင် ပေါ်ပေါက်လာသောကြယ်တစ်ပွင့်၊၊ B2Bဂိမ်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များ၏
White Label ကာစီနိုဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊၊ကျွန်တော်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ကျွန်တော်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့်သော ဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်ပေးကမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်၊၊
B2B ဂိမ်းရွေးချယ်ခြင်း၏ အကျိုး
ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ဂိမ်းရှိအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းသည်၊၊
White Label စနစ်အပြည့်
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကို ငွေသားဆိုဒ် (သို့) ခရစ်ဒစ်ဆိုဒ်တွင် လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်များကို လွယ်ကူစွာ ညှိယူနိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာ အသုံးချနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အသင့်သုံးပုံစံကို
အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အသစ်သောအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များကို အချိန်တိုအတွင်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်၊၊
သိသာထင်ရှားသော ဈေးကွက်များတွင် အထူးပြုထားသည်
ဂိမ်းလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံများစွာရှိသော ကျွန်တော်တို၏အဖွဲသည် သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် အကြံပေးပါလိမ့်မည်၊၊
ယုံကြည်စိတ်ချစွာတပ်ဆင်နိုင်ဖို့ရာ အကောင်းဆုံးသော နှုန်းထားများနှင့် ဈေးနှုန်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်၊၊
အမြင့်ဆုံးသော စိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူရန် ကျွန်တော်တို့၏ White Label ဆိုဒ် နှင့် ဂိမ်းများတွင် အသစ်သော ပါရှိသည့်အရာများ
ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုရှိသည့်အတွက် ပါဝင်သူအားလုံးအတွက် မျှတသည့်ဂိမ်းများကိုသာ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်ပါသည်၊၊
B2B ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၏ အကျိုးများ
အော်ပရေတာများသည် B2B Gaming's API မှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းကို ကျောထောက်နောက်ခံရုံးတစ်ခုမှ
အများအပြားရောင်းချသည့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကိမ်းပိန်းများကို ထိရောက်စွာဖန်တီးနိုင်သည်၊၊
ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့သူများမှ ကျယ်ပြန့်သောဂိမ်းများစွာ
ပေါင်းစည်းထားသောစနစ်သည် ငွေသားဆိုဒ်အတွက်အသင့်ဖြစ်ပြီး အေးဂျင့်အဆင့်သည် ခရစ်ဒစ်ဆိုဒ်အတွက် အသင့်ဖြစ်သည်၊၊
ကစားသူများအပေါ် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော SCALABLE
မှားယွင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် ခိုင်မာသောနောက်ခံ နှင့် အစီရင်ခံစနစ်၊၊
(၂၄) နာရီ (၇)ရက် ဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ White label အွန်လိုင်းကာစီနိုဖြေရှင်းချက်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းကာစီနိုကိုတပ်ဆင်ရန် လက်ရှိတွင်တိုးတက်ပြီး
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လှုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်၊၊
သင်နှင့်အတူ ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လိုသောကြောင့် ထိရောက်သော ဈေးနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်၊၊
ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းကာစီနိုကို တပ်ဆင်ရန်ဆန္ဒရှိပါက (သို့) ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါက B2B ဂိမ်း သည်သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်၊၊
တစ်နည်းအားဖြင့်သင်သည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်နှင့်အတူ အွန်လိုင်းကာစီနိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် သင့်အနေဖြင့်
တန်ဖိုးရှိသောကျနော်တို့ဂိမ်းရှိ တိုက်ရိုက်ဖဲ၊ စလော့၊ အားကစားလောင်းကြေးထပ်ခြင်း နှင့် ထီများကို သင့်ဆိုဒ်သို့ ပေါင်းထည့်နိုင်သည်၊၊
သင်၏ B2B ဂိမ်း White Label အွန်လိုင်းကာစီနိုအတွက် ဂိမ်းများလိုအပ်ပါသလား?
သင့်အတွက် ရွေးချယ်စရာ ဂိမ်းထောက်ပံ့သူများစွာရှိသည်
ကျွန်တော်တို့၏ B2B ဂိမ်းများသည် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ကစားသူများအတွက် မြောက်များစွာသောဂိမ်းများ ပေါင်းထည့်ပေးရမည်ကိုနားလည်ထားသည်နှင့်အညီ သင်၏ B2B ဂိမ်း White Label အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်သို့ ပေါင်းထည့်ရန် များစွာသောထိပ်တန်းဂိမ်း ထောက်ပံ့သူများးကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်၊၊
အစမ်းကစားလိုပါသလား (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောမေးခွန်းများကို မေးမြန်းလိုပါသလား?
သင့်ကိုဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်ကိုချန်ထားပါ၊၊ ကျွန်ုပ်တို့သင့်ထံဆက်သွယ်လာမည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အွန်လိုင်းဂိမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ပြောင်းလဲသောလိုအပ်ချက်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့် White Label ကာစီနိုဖြေရှင်းချက်များကို ပေးပို့နိုင်ရန်ဖြစ်သည်၊၊ ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းများသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချက်များအပြင် ပြီးပြည့်စုံသော တည်ငြိမ်မှု၊ ဖြန့်ကျက်မှု နှင့် မြန်ဆန်သောတိုးတက်မှုများကိုပေါင်းထည့်ကာ ဖောက်သည်များကို အကျိုးခံစားခွင့်များ ပေးကမ်းလျှက်ရှိပါသည်၊၊